Window7ကွန်ပျုတာ Folder မှာ Drive အားလုံးကြည့်နည်း ~ မျိုးကို
Window7ကွန်ပျုတာ Folder မှာ Drive အားလုံးကြည့်နည်း
21:47 Drive, Technique, Window7No comments
ဘာမှ မပါတဲ့ Drive တွေ အပါအ၀င် Drive အားလုံးကို ပြချင်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ..။ ဥပမာ - Memory Card Reader လိုမျိုးတွေကို ပြောတာပါ ...။
1.Window Key + R ကိုနှိပ်ပီး Run ကို ဖွင့်ပါ။
2.Control Folders လို့ ရိုက်ပါ။
3. အောက်ပါ ပြထားသလိုလေး ရပီးဆိုရင် View >> Advanced Setting >> Hide empty drives in the Computer folder မှာ အမှန်ခြစ် ဖြုတ်လိုက်ပါ.. Apply >> OK လိုက်ပါ ..။
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလို Explorer ထဲမှာ Drive တွေကို ပြပေးနေမှာပါ ။
ဒါပေမယ့် Diskpart နဲ့ ဖျောက်ခဲ့တဲ့ Drive ကိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ ဖော်ပြ မပေးပါဘူး။